Teknolojiyada - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Iimayl u dir TechSupport@rdale.org (ku dar magaca ardaygaaga, iskuulkiisa, macluumaadkaaga xiriirka iyo baahida taageerada farsamada)
Barashada Shakhsiyeed (PerL) oo leh 1: 1 Qalabka
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay siisaa arday kasta oo fasalada K-12 ah qalab digital ah. Qalabku wuxuu ardayda ku xiraa nashaadaadyada wax lagu barto fasalka iyo fursadaha wax barasho, wuxuuna shaqsi ahaan u qoondeeyaa khibradaha waxbarasho. Qalabka dhijitaalka ah badanaa waa Chromebook ama iPad.
Heshiiska Adeegsiga Qoyska
Qorshaha Badbaadinta Aaladda (Caymiskii Hore ee Chromebook)
Bakhaarka Dugsiga ee Campus (Portal Portal)
Internet Access / Hotspots
Ardaygaaga ayaa masuuliyadi ka saran tahay u hogaansanaanta Nidaamka Gudiga 524: Isticmaalka Internetka ee La Aqbali Karo iyo Nidaamka Badbaadada iyo Xeerka Gudiga 514: Mamnuuca Cagajuglaynta sida ku xusan Buug-gacmeedka Ardayda: Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha.
Kaarka Heshiiska Ardayga / Qoyska - Isbaanish
Kaarka Heshiiska Ardayga / Qoyska - Soomaali
Qalabka dijitaalka ah iyo agabyada kale waa hantida Dugsiyada Robbinsdale Area waana in lagu celiyaa Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale dhammaadka sannad dugsiyeed kasta ama marka laga baxo dugsiga. Ganaaxyada waxaa lagu qiimeyn doonaa waxyeelada dayacaada ama qalab lumay, xeedho ama kiis. Qalabka iyo agabyada aan lagu soo celin taariikhda ardaygu ka baxayo dugsiga ayaa loo gudbin doonaa sida loo xaday waaxda booliska ee deegaanka.
Qorshayaasha Badbaadinta Aaladda (horay loogu yaqaanay Caymiska Chromebook) waxaa laga iibsan karaa khadka tooska ah iyadoo la adeegsanayo Bakhaarka Dugsiga ee Infinite Campus. Qoysasku waxay u iibsan karaan Qorshayaasha Ilaalinta Aaladda dhammaan ardayda qoyskooda hal macaamil.
Gelitaanka Xarunta aan Xaddidneyn
Tilmaamaha Bixinta Dukaanka Dugsiga ee Campus
Soo gal Xarunta Infinite (badhanka kore)
Guji "Dukaanka Iskuulka" ee ku yaal dhinaca bidix
Guji astaanta dugsiga uu ardaygaagu dhigto
Xulo shayga aad jeceshahay inaad ku bixiso (ie, Qorshaha Ka Hortagga Aaladda, qalabka, isboortiga)
(Haddii aad haysato wax kabadan hal arday oo dhigta iskuulka aad dooratay talaabada 3aad, waxaad ubaahantahay inaad magac ka xusho liiska qaatayaasha goobta qaata.)
Guji batoonka "Add to Cart" badhanka
Haddii aad leedahay arday (arday) kale, ku celi tallaabooyinka 3-4.
Ku dar habka lacag bixinta; VISA, MasterCard, Discover iyo American Express waa la aqbalay
Guji "Gudbi Bixinta"
Isticmaalka internetka ayaa loo baahan yahay inta badan shaqada ardayda si loo keydiyo loona wadaago. Haddii ardaygaagu uusan haysan internet, fadlan la xiriir dugsigaaga si aad u hesho macluumaad ku saabsan fursadaha internet-ka ee qiimaha jaban ee qoyskaaga. Meelo kala duwan oo bulshada ka mid ah ayaa sidoo kale bixiya internet bilaash ah oo bilaash ah, oo ay ku jiraan maktabadaha dadweynaha.
Goobaha kulkulul waxaa loo adeegsadaa helitaanka internet. Degmadu waxay leedahay goobo kulul oo loogu talagalay qoysaska aan lahayn internetka; isticmaal foomkan si aad u codsato kulkulul. Qof ka socda iskuulka ardaygaaga ayaa kula socon doona adiga.
Macluumaadka Ardayga / Xariirka Waalidka
Macluumaadka ardayda ee muhiimka ah waxaa laga heli karaa Infinite Campus, Schoology iyo Seesaw. Haddii aad ilowday magacaaga isticmaalaha ama lambarkaaga sirta ah, waxaad codsan kartaa dib-u-dejin .
Soo Gal Aqoonyahan
Cusbooneysii dookhaaga Ogeysiiska
Isdiiwaangeli Xisaabta Xariirka Waalidka
Boggan dhexdiisa, qoysasku waxay:
Hubi buundooyinka ugu dambeeya iyo dhibcaha
Isku dheelitirka xisaabta
Macluumaadka baska / gaadiidka
App Inus Campus Infinite
Xidhiidhka Moobilka Infinite Campus waa barnaamij loo heli karo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada. Kuma jiraan dhammaan astaamaha kor ku xusan, ee laga helo websaydhka Infinite Campus. Abka waxaa si fiican loogu isticmaalaa kaqeybgalka iyo jadwalka macluumaadka. Waad dejin kartaa ogeysiisyada qoraalka xaadiritaanka ee aagga Degaanka ee barnaamijka. Ha iloobin xiriiriyeyaasha kale ee barnaamijka, maadaama Schoology loo adeegsado meeleynta iyo fasalada maalinlaha ah.
Aqoonsiga Degmadu waa MHLVRD. Marka ugu horeysa ee aad isticmaasho abka, raadi 'Robbinsdale' oo xulo 'Minnesota' gobolkaaga. Kadib dhagsii 'Robbinsdale.' Marka xigta, gali magacaaga iyo lambarkaaga istcimaala Xariirka Uma baahnid inaad geliso macluumaadkaaga soo gelida mar kasta oo aad adeegsanayso barnaamijka.
Dukaanka Apple App
Bakhaarka Android / Google Play
Maamul dookhaaga xiriirka adoo dooranaya sida aad u hesho farriimaha (wicitaannada taleefanka, emaylka ama farriimaha qoraalka ah).
Ka dib markii aad gasho Xarunta Infinite, oo laga soo galo Liistada Isticmaalaha
Xullo Xulashada Xiriirka
Dib u eeg macluumaadka xiriirka ee jira (lambarrada taleefannada iyo cinwaanada emaylka) oo calaamadee dookhyada Rasuulka ee aad rabto.
Fadlan ha GUULEYSTO hubi maadaama degmada iyo dugsiyadu ay u adeegsadaan dejintan farriimaha.
Farriimaha deg-degga ah waxaa loo diraa iyada oo ku saleysan macluumaadka xiriirka ee ku taxan.
Fariimaha imaanshaha waxaa la ogeysiiyaa waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah marka ardaygu ka maqnaado ama ka daaho fasalka.
Fariimaha akhlaaqda ayaa la ogeysiiyaa waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah marka ardaygu ku lug yeesho dhacdo anshaxeed.
Farriimaha guud waa fariimo kasta oo ay ku calaamadeyso guud ahaan degmada ama dugsiga. Fadlan sii hagaajinta goobtaan.
Fariimaha mudnaanta leh waa fariimo ku calaamadeysan "ahmiyada sare" qofka abuuray fariinta.
Haddii degmadu ama iskuulku xuquuq siiso, macallimiintu waxay farriimo u diri karaan waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah oo ku saabsan fasallada ku dhaca iyo shaqooyinka ka maqan. Macallimiintu sidoo kale way diri karaan ogeysiisyada guud.
Ma ubaahantahay caawimaad sameynta xisaab xariir waalid? Ma hubo inaad mid leedahay? Dhibaato ma kaa haysataa cusbooneysiinta dookhaaga? La xiriir Gretchen Cleveland Gretchen_Cleveland@rdale.org .
Schoolgy waa madal ay adeegsadaan ardayda dhigata fasalada 4-12aad ee shaqooyinka, cusbooneysiinta fasalka iyo dhacdooyinka kalandarka qaarkood. Qoysasku waxay si otomaatig ah u heli doonaan soo koobitaan emayl toddobaadle ah; waad cusbooneysiin kartaa goobtan ogeysiiska ka dib markaad gasho.
In Schoology ardayda waxay:
Soo gal qalabka koorsada
Soo gudbi shaqo
La xiriir asxaabtaada fasalka iyo macallimiinta
Hubi buundooyinka, shaqooyinka ka maqan iyo shaqooyinka shaqsiyadeed.
Wadahadalka khadka tooska ah
Ogeysiisyada maalinlaha ah
Xiriirka iskuulka / lataliyaha
Barnaamijka Schoology ee loo heli karo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada. Ka dib markaad rakibto barnaamijka, fur barnaamijka oo guji 'Iskuul ama domain' sanduuqa raadinta. Ku qor 'Dugsiyada Aagga Robbinsdale' ama 'learn.rdale.org'. Sanduuqa gelitaanka degmada ee calaamadeysan ayaa soo muuqan doona si loo xaqiijiyo inaad ku sugan tahay meesha saxda ah. Ku soo gal magacaaga iyo isgarad-ereygaaga.
Seesaw waa madal ay isticmaalaan ardayda Kindergarten ilaa fasalka 3aad si ay u muujiyaan waxbarashadooda. Ardaydu way sawiri karaan, sawiri karaan, duubi karaan fiidiyowyo iyo wax badan si ay ugu qabtaan barashada faylalka. Macallimiintu sidoo kale waxay la wadaagi karaan qoraallada, sawirrada iyo fiidyowyada qoysaska.
Seesaw Qoyska App
Adiga macallinka ardayga ayaa ku siin doona lambarka marin u helka si aad ugu xirto koontada ardaygaaga barnaamijka.
Ardayda dugsiga sare waxay u isticmaali karaan Naviance:
Qorsheynta dugsiga sare kadib
Dib u bilaabid
Raadinta arjiga kulleejada
Soo Galida Naviance
Username: Lambarka Aqoonsiga Ardayga
Password: dhalasho (mmddyy)
Qoysaska badankood, koontooyinka waxaa loo sameeyay markii ardaygaaga (ardayda) ay iska diiwaangeliyeen Dugsiyada Aagga Robbinsdale, hase yeeshe, waad iska diiwaan gelin kartaa koon adigoo gujinaya hoos. Si aad adigu u hesho qalabkan, SAU wuxuu u baahan yahay cinwaan emayl oo hadda faylka ku jira. Fadlan wac ama email u dir shaqaalaheena taageerada haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay marin: Gretchen_Cleveland@rdale.org ama 763-504-8060.
Foomka Diiwaangelinta Xariirka Waalidka
Hadafkeenu waa inaan siino tikniyoolajiyad ku dayasho mudan, taageero iyo hogaamin shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska. Waxaan siineynaa adeegyo kaladuwan degmada si loo hubiyo in waxbarashadu dhacdo maalin kasta ay tahay mid ku lug leh, ku habboon kuna habboon baahiyaha bartayaashayada.
2016-2020 Qorshaha Teknolojiyada Degmada